मिनाले पूर्वपतिलाई जन्मदिनमा सम्झिदै खोलिन सम्बन्ध टुक्रीनुको रहस्य - Filmy News Portal Of Nepal
सम्बन्धका फूलहरु जब सम्म स्नेह रहन्छ; जब सम्म बिस्वाश र न्यानो साथ अनि समर्थन रहन्छ तवसम्म त्यो फूल ओइलाउदैन नत औकेर नै झर्छ। यदि माया र बिश्वाश छ भने सुकेर झरेको फूलपनी रसिलो लाग्छ। यस्तै आफ्नो छुटिसकेको श्रीमानको नातालाई ” डियर एक्स ” को संज्ञा दिदै मिना ढकालले आफ्नो पूर्वपती हास्य ब्यंग्य कलकार मनोज गजुरेललाई सम्झेर खुल्ला पत्र सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेकिछिन् । उनले लेखेको खुल्ला पत्र यस्तो छ।
डियर एक्स! आज तिम्रो जन्मदिन परेको कुरा तिमिलाइ गुरु मान्ने तिम्रो ताप्लेजुङे छिमेकी भाइ मार्फत यश संजालको भित्तामा देखे। 🌹 सम्पुर्ण शुभकामना तिमिलाइ🌹 यसै अबसरमा केही कुरा नलेख्दा फेरि हाम्रा शुभचिन्तकलाई मैले तिमिलाई सम्झेको भन्दै गलत अर्थ लाग्ने भएकोले केही लेख्नै पर्ने मेरो पनि बाध्यता!
हेरन….. हुनत तिमी दुनियाँको लागि हात्ति होलाउ! तर मेरो लागि झिंगा होउ! भनिन्छ नि झिंगाको श्रापले डिंगा मर्दैन….. म हो त्यही डिंगा हु! तिमिले मलाई सडकमा देख्न चाहेको तिम्रा मनोकांक्षा पूरा होलान नहोलान.. तिम्रा प्रार्थना भाकल केके जातिको सुनुवाइ होला नहोला!! तर म सडकको ब्यक्तिलाई महलमा पुर्याउन सक्ने गुण,क्षमता, सामर्थ्य भएकी एक अदभूत नारी हु भन्ने कुरा तिमिलाई भन्दा सायदैलाई थाहा होला।
हामी कागजी कानूनी रुपमा छुट्टिनु भन्दा केही दिन पहिले तिमिले मेरो सामु आयेर भनेको रहेछौ! कि त्यो पनि करिब २२ बर्षको जीवनकालमा पहिलोपटक मिठो बोलेर.. मलाई माफ गर!मैले तिम्रा लागि जिबनमा केही गर्न सकिन! अब आफ्नो लागि आफै गर तिमिले धेरै गर्न सक्छौ! तिमिप्रती मेरो कुनै चित्त दुखाइ रिस राग इगो छैन! अरु पनि केके भन्दै! भावुक भएउ या नाटक गरेउ! तर मलाई ती शब्दले कतै पगालेन र भावुक पनि बनाएन! त्यो चै किन भनेर मेरो मनलाइ मात्रै थाह छ।
ल त्यहा सम्म त माफ नै गरिदिन्थे कि! तर त्यस्पछी, सम्बन्ध बिच्छेद पछि छोरो र मेरा घरपरिवार अनि नजिकका तिम्रा साथी मार्फत जुन जुन हर्कत गर्दै फेरि पनि गल्ती र अपराध गरेउ नि! त्यस्पछी त झन मलाइ तिमी प्रती अलि अलि भको दया र सहानुभूति पनि मरेर गयो….
खैर जे होस सधैको बर्ष जस्तै यो साल पनि….जीवनमा अझै धेरै उन्नती प्रगती अनि मैले भन्दा ठूलो महल बनाइ दिने जिबन साथिको प्रबेस होस! तिम्रो बाकि रहेको खुसीले तिम्रो जीवन रगिंन बनाओस.. जन्मदिनको फेरि पनि असिम शुभकामना🌹(भुलचुक लिनेदिने)